KMN Kush Media Network: ጉዳያችን – January 27, 2020 – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooKMN Kush Media Network: ጉዳያችን – January 27, 2020
KMN:- January 27/2020 #ጉዳያችን
በወለጋ ህዝብ ላይ ስለተከፈተዉ ጦርነት እና ባጠቃላይ ስለ ሀገሪቱ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ትኩርት ያደርገ ውይይት ከ ፕ/ር እዝቅኤል ገቢሳ እና ዶ/ር ፀጋዬ አራርሳ ጋር የተደረገ::
Amajjii 27 2020
##Guyyaa har’aa kana gujii lixaa aanaa dugda daawwaa ganda Cabbiitti magaadaa jedhamuutti nama maqaan isaa
Bokkuu magaaldaa jedhaamu loon karraa tokkoo guutuu irraa saamuun qallatanii nyaataa jiruu
Gabaaboo Huqqaa umurii isaa gannaa i0 kan ijaa hin qabnee maatii isaa guutuu ilmaa waggaa 2 osoo hin hafnee hidhanii, loon isaa guutuus saamanii qalaataa jiruu. Gandii isaa beeruudha. Akkasumaas ganduuma beeruu kanaatgi nama
Daadhacha boruu nama jedhamuus aanaa dugda dawwaa gandaa beeruu loon isaa fuudhanii guutuu jalaa qalataa jiruu. Aanuma dugda daawwaa ganda gooroo baalliitti saamicha maqaa sakkaattaan gaggeessaa jiruu. Dubaartii maqaan, Galgaluu Adaluu mana seenuun mana guutuu sakaattatee warqii mormaa osoo hin hambiisin sakaatta’uun irraa yaafattee, saamiicha jajjaabaa midhaan qarshii osoo hin hambiisin saamanii jiruu.
Haaluma wal fakkaatuun Aanaa qarcaa gaaleessa nageessoo, sokkee, baddeessaa gaalessa burqaa fi kkf gandoota jedhaaman keessaatti, makkalaakayaa milishaa KBO FI poolisii oromiyaa wal tahuun uummaata waliiyti baasanii uummataan iyyaa iyyaa jedhanii iyyisiisaa jiruu. Shanee jedhaa iyyaa nutii qophaa shaneen hin duunu siniis nu faana duutu jechuun uummaata hiraarsa jiruu haala kanaan uummaanni har’aan tanaa osoo loon hin bobbaafatiin jiraa. Haaluma kanaan kalee jechuun 26 01 2020 aanaa bulee horaa gandaa kalaaltuutti kan dhalatee achii baqatee aanaa galaanaa ganda carii yabasiireetri nama maqaan isaa boruu gammaadaa jedhaamu ajjeesaan. Aanaa dugda dawwaa ganda burqituu keessaatti jaarsa gannaa 60 maqaa turee ungaayyaa jedhaamuu dhukkuubsataa kaansarii kan tahee haadha manaa isaa waliin sibiilaan dhaanatii reebaa mana hidhaa aanaa dugda daawwaatti geessaan. Reebiicha kanaan kan kahee dhiiga diddiigaa waan taheef du’eef jiraateen isaa hin beekamiin jiraa. Yaalii oromoo fi oromummaa dhabaamsiisanii, oromiyaa balleessuuf godhaamu kan kibbaaf lixaatti qofatti hin daangofneef oromoo walii birmaadhu
#ODUU_SIMBIRTUU!! – Amajjii 27, 2020
Qeerroo Wallaggaa Mormii dhoosee jira!
~ Amma Daandii Finfinnee irraa gara Naqamtee geessu guutumatti cufameera!
~ Daandiin wallagga irra gara Asoosaa geessuus Cufameera!
~ Daandiin Naqamtee irraa gara Naannoo Amaaraa geessuus guutumatti yeroo amma Cufameera! Mormii gabaa Laggannaaf Qeerroo Wallaggaa afranii qophii xumurre jirra Qeerroon Oromiyaas akka nu dirmatan amuma hatattamaan nu maxxansi”
Sagalee Qeerroo Lixa Oromiyaa irraa!